စိတ် တွေ လေ နေ ခဲ့ တယ် – Hlataw.com
ကျွန်တော့်စိတ်တွေ လုံးဝရှုပ်ထွေးနေ ခဲ့တယ် စီးပွားရေးကအဆင်မပြေ လူမှု့ရေးက ခက်ခဲဆိုတော့ စိတ်တွေလေလာခဲ့တယ် စိတ်လေလို့ဆိုပြီး ဖြစ်ချင်ဖြစ် ဖေ့ဘုတ်မှာ အာကာနိုင် ဆိုတဲ့ တဲ့ ဆက်ဆီ အကောင့် ဖွင့်လိုက်တယ် ဒီ အကောင့် လေးထဲမှာပဲ သာယာနေခဲ့မိတယ် ဝါသနာလည်းပါတာကိုး အလုပ်နားချိန်လေးတွေမှာ အင်တာနတ် လေးဖွင့်ပြီး အပြာစာလေးဖတ်လိုက် ကြိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းဆို ရှယ် ယူပြီးတင်လိုက်ပေါ့ တစ်နေ့သူမနဲ့ဆုံဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ် ” ချွင် … …” ဆိုပြီး မက်ဆေ့ ကနေ မက်ဆေ့လေးတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့တယ် သူမကပြောတယ် ” ပျင်းတာဟာ ” ” ပျင်းရင်စာဖတ်ပေါ့ဗျ ကျွန်တော်တင်ထားတာတွေအများကြီးပါ ” ” ဖတ်လို့ပြီးသွားပြီ ဗွိဒိယို ကြည့်ချင်တာ ယူ ထဲရှိလား ရှိရင်ပို့ပေးပါအုံး ကြည့်ချင်လို့ ” ” အင်းလေ ခဏစောင့် ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်နော် ” ” ကျေးဇူးပါပဲရှင် ” ” ငင့် မိန်းကလေးလားဗျ ” ” မိန်းကလေးကရော မကြည့်ရဘူး စာအုပ်မဖတ်ရဘူးလား ဟင် “။
ရပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်က မိန်းကလေးနဲ့ ဒီ အကောင့် ဖွင့်ကတည်းက မပြောဘူးသေးလို့ အံသြသွားတာပါ ဒါနဲ့ အသက်ကဘယ်လောက်လည်း ကွန်တော်က နှစ်ဆယ့်ခြောက် နှစ်ပါ ပြီးတော့အိမ်ထောင်သည် ကလေးအဖေပါ ” ” ပွင့်လင်းလှပါလား ဒို့က သုံးဆယ့်ရှစ်နှစ် တစ်ခုလပ် ကလေးနှစ်ယောက်အမေလေ ” ” သြော် ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ ” အဲ့လိုနဲ့ သူနဲ့ရင်းနှီးသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ နောက်နေ့တွေမှာ ကျွန်တော်က ဝပ်ရှော့လုပ်တယ်ဆိုတာသိတော့ သူ့မိတ်ဆွေအတွက် ဆိုင်ကယ်ရှာခိုင်းရင်းနဲ့ သူ့ဖုန်းနံပါတ်ပါသိခွင့်ရခဲ့တယ် နောက်နေ့တွေမှာ မက်ဆေ့ ကနေစကားအမြဲပြောဖြစ်တယ် ဖုန်းထဲကကြားတဲ့အသံအရ သူ့ကို သုံးဆယ့်ရှစ်နှစ်ဆိုတာမယုံဘူးဖြစ်နေတာ အသံလေးကချိုပြီး နုနေလို့ မယုံတာ ကိုယ့်အနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူလောက်ပေါ့ သူကလည်း ဗွိဒိယို ကော အပြောမခံတော့ ပိုပြီးမသင်္ကာတာပေါ့ လိုင်း ပေါ်မှာ ပြောကျဆိုကျ။
သူ့ဆီကိုလည်း ဗွိဒိယို လေးတွေပို့ပေးပေါ့ အစဉ်ကိုပြေလို့ ” မင်းငါ့ကို ဗွိဒိယို ကော ခေါ်မယ့်အစား တခြားသူတွေနဲ့ ခေါ်ပါ့လားဟင် ” ” ကျွန်တော်မှ မခေါ်ချင်တာပြီးတော့ ဘေ နဲ့ဆိုစိတ်မဝင်စား ” ” သိပါတယ် ဦးကပ်စေးရယ် ” ” ဟားးးးး ထားပါတော့ဗျာ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က အန်းဒိတ်ကို သုံးဆယ့်ရှစ်နှစ်ဆိုတာ မယုံဘူးဗျ ” ” ဘာလို့လည်း ပြောပါအုံး ” ” ဖုန်းထဲကအသံက ငယ်နေသလားလို့ ” ” ဟင်း မသိတာကျနေတာပဲ ဗွိဒိယို ကော ပြောချင်တိုင်း အဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့ သိလား အန်းဒိတ်တွေက ဈေးကြီးတယ် ရှားတယ်ကွ ” ” ဘာလို့ ဈေးကြီးတာလဲဗျ လူကကြီးတာလား ပစ္စည်းကကြီးတာလား ဟင် ” ” လူကော ပစ္စည်းရော အန်းဒိတ်တွေက ပညာစုံတယ်ကွ သိလား ” သူ့ရဲ့ ဒီအပြောလေးနဲ့တင် အပြင်မှာအရမ်းတွေ့ချင်စိတ် ဖြစ်မိတယ် တဖြည်းဖြည်းပြောရင်း နဲ့ ဗွိဒိယို ကော လည်းပြောဖြစ်ကျတယ် ဆက်စ် အကြောင်းတွေလည်းပြောဖြစ်ကျတယ်။
သူ့အကြောင်းလည်းကိုယ်သိသလို ကိုယ့်အကြောင်းလည်း သူသိသွားတယ် သူ့ရဲ့ အကောင့်အမှန် လည်းသူကပြောပြတယ် ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်အမှန် လည်းသူ့ကိုပြောပြတယ်ဆိုတော့ သိသွားကျတယ် အတိုချုပ်ရရင် လိုင်းပေါ်မှာ ရည်းစားဖြစ်သွားတယ်ဗျာ လိုင်းပေါ်မှာတင် လိုးဖြစ်နေကျတယ် ဖုန်းနဲ့ရောပေါ့ သူကလည်းပြောတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ အသိုက်အမြုံကို မဖျက်ဆီးဘူးတဲ့ ချစ်နေရရင် ပြီးပြီတဲ့ဗျာ ဟောကြည့် သူ့ရဲ့ အဲ့ဒီအပြောလေးနဲ့တင် သူ့ကိုတကယ်ချစ်မိသွားတယ် အဲမေ့တော့မလို့ သူ့ရဲ့ အကောင့်အတု့ က မောင့်စိတ်တိုင်းဖြစ်စေရမယ်တဲ့ တွေးကြည့်ပေါ့ဗျာ သူက မကွေးက ကျွန်တော်က မန်းလေးက တွေ့ဖို့အတွက် နှစ်ယောက်လုံးကြံကျဖန်ကျပေါ့ဗျာတွေ့ခွင့်ရပါပြီသူနဲ့ သူကမန်းလေးကို ဘုရားဖူးရင်းနဲ့လာတာ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက မေမြို့ထပ်သွားတော့ သူကနေခဲ့တယ် ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရအောင်ပေါ့ သူနဲ့ကျွန်တော် မဟာမုနိ ဘုရားကြီးမှာစတွေ့ကျတယ်။
ဖုန်းနဲ့ချိန်းပြီးပေါ့ ပြီးတော့ ကျောက်စိမ်းဘုရားဖူး စွယ်တော်ဘုရားဝင် ပြီးမှ မန္တလေးတောင်ကိုဆက်သွားကျတယ် မန္တလေးတောင်က အပြန်ကျမှ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အခန်းယူပြီး သူနဲ့ကျွန်တော် အချစ်စခန်းဖွင့်ဖို့ အခန်းထဲဝင်လာခဲ့လိုက်တယ် အခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်းပဲ သူ့ရဲ့ နုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်ယူနမ်းပစ်လိုက်တယ် သူ့ဖက်ကလည်း တုံ့ပြန်အနမ်းတွေနဲ့ ပြန်လာပြီးနမ်းတယ် သူနမ်းပုံလေးက တကယ်ကို အန်းဒိတ်ပီသတယ်ဗျာ သူ့ရဲ့လျှာဖျားလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ပါးစပ်အတွင်းထဲ ထိုးလိုက် ပြီးရင် ပြန်ထုတ်သွားလိုက်နဲ့ သူ့ရဲ့လျှာကို အမိဖမ်းမရဘူး ဖမ်းမရလေ ဖီးကတက်လေ လိုးချင်လာလေ နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေရင်းနဲ့ပဲ သူ့ကိုမွေ့ယာပေါ် အသာယာလှဲချလိုက်တယ် ပြီးတော့အနမ်းမပျက်ခဲ့ပဲ သူ့ရဲ့အပေါ်အင်္ကျီလက်ရှည်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ် နောက်တော့ သူ့ရဲ့ အင်္ကျီကိုထပ်ချွတ်လိုက်တယ် အပေါ်ပိုင်းမှာ လက်ကျန် ဘော်လီတစ်ထည်ပဲ ရှိတော့တယ်။
လက်ကျန်လေးလည်း ထပ်ချွတ်လိုက်တယ် နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေရာက တဖြည်းဖြည်းလျှောဆင်းလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ရင်သား မို့မို့ထွားထွား နှစ်ဖက်ဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့တယ် နို့အုံ့နှစ်မြွှာကိုလည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖွဖွလေးဖျစ်နယ်ပေးလိုက်တယ် နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုကို တစ်လှည့်စီ လက်နှင့်ပွတ်လှိမ့် ဖျစ်ချေလိုက် သွားလေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွ ကိုက်ခဲပြီး စုပ်ငုံလိုက် နို့သီးဖျားနှစ်ခုကို စို့လိုက်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ” အို အို မောင် ရယ် ဘယ်လို ဘယ်လိုတွေလုပ်လိုက်တာလဲကွယ် ဟင့်ဟင့် ဟင့် ” သူ့ရဲ့ ပါးစပ်ကနေညည်းသံလေး သဲ့သဲ့ထွက်လာပြီး တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ စုပ်တယ် ပြီးတော့ ခါးကလေး ကော့တွန့်တက်လာတယ် ကျွန်တော်ကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး သူ့ရဲ့လံချည်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အင်္ကျီရော ပုဆိုးပါချွတ်ပြီးနေပြီ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှလည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပါးပါးလေးတထည်ပဲ ကျန်တော့တယ် သူ့ရဲ့ ဖင်သားဆိုင် ကားကားအိအိကြီး နှစ်ဖက်ကို ကျွန်တော် ဖျစ်လိုက်ညှစ်လိုက်လုပ်ပြီး။
အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် သူကလည်း ဖင်ကိုအသာအယာကြွပေးတယ် အောက်ခံဘောင်းဘီကျွတ်သွားတော့မှ ဖင်သားနှစ်ဖက် အကြား အထက်နားလေးကသူ့စောက်ခေါင်း အတွင်းထဲထိ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကို တံထွေးအနည်းငယ်စွပ်ပြီး သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ပြီးထိုးဆွကစားပေးလိုက်တယ် သူ့ရဲ့ဆီးခုံမို့မို့အောက်က စောက်ပတ်ပြင် ဖောင်းဖောင်းအိအိကလေးကိုလည်း လက်တစ်ဖက်က ပွတ်သပ်ပြီး နူးပေး ဆော့ပေး နေလိုက်တယ် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ပေါင်သားဖွေးဖွေးကြီးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်တစ်ဖက် ညာတစ်ဖက် ထောင်ကားပေးလိုက်တော့ ပေါင်ခွဆုံနေရာမှာ အမွေးအမျှင်တွေတစ်ပင်တစ်လေမှ မရှိအောင် ရိတ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးကို ပါးစပ်နဲ့ဖိကပ်ပြီး အငမ်းမရပဲ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ဆွဲပြီး လျှာနဲ့ပျွတ်ကနဲ မြည်အောင် အောက်ကနေပြီး အပေါ်ကို ယက်သပ်တင်ပစ်လိုက်တယ် ” အမယ်လေ့ လေး မောင်ရယ် … အ ရှီး အ အလာ့ … လုပ် လုပ်ရက်လိုက်တာ။
ဘယ်လိုတွေများ လုပ်နေတာလဲကွာ အင့် ဟင့် …အား အိ အီး အီး သူညည်းလည်းညည်း ကော့တက်သွားပြီး ကျွန်တော့် ခေါင်းကဆံပင်တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ယောင်ယမ်းဖမ်းဆုပ်ပြီး ခေါင်းကိုလည်း သူ့ရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားမှာ ကပ်ဖိထားတယ် ကျွန်တော် သူ့ကို အပီအပြင် လျှာအစွမ်းတွေပြနေတုန်းပဲ သူ့ရဲ့စောက်စေ့ပြားပြားကလေးကို ဆွဲစုပ်ပေးလိုက် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ကို အောက်ကနေအပေါ်ကို ထောင်လိုက် ယက်ယက်ပေးလိုက် စောက်ခေါင်းလေးထဲ လျှာသွင်းမွှေနှောက်ပြီး အတွင်းသားအဖုအထစ်တွေကို ဝက်အူလှည့်သလိုပဲ လှည့်ပတ်ပြီးမွှေ့ထိုး သိမ်းကျုံးဝေ့ဝိုက်ပြီး ယက်ပစ်လိုက်တယ် သူလည်း ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူသွားလောက်တယ် သူ့စောက်စေ့ပြားပြားလေးကို စုပ်ဆွဲယက်ဆွပေး နေတာကနေ စောက်ပတ်အခေါင်းပေါက်ထဲကို လက်ညိုးနဲ့လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးထိုးပြီး အဆက်မပြတ်ထိုးနှိုက်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့။
သူ့စောက်ခေါင်းထဲကနေ စောက်ရည်တွေ တားမနိုင်ဆီးမရဆိုသလိုပဲ အပြင်ဖက်ကိုပါ လျှံပြီး ယိုစီးကျလာတယ် သူလည်းခံချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ် “အ အ တော် တော် ပြီ မောင် ဟင်း ဟင်း မောင့်လီးနဲ့သာ မြန်မြန်လိုးလိုက်ပါတော့ကွာ မင်းလီးကြီး … ချစ် ချစ် မဟန်နိုင်တော့ဘူး … ကွာ … ရ … ရပြီ ဆက်မမှုတ်ပါနဲ့တော့ … နော် နော် မောင် ” ” ကြိုက်လား ချစ် … မောင် လိုးပေးရတော့မလား ” ” လိုးလိုက်စမ်းပါ မောင်ရယ်… ချစ် စောက်ပတ်က … အရည်တောင်ရွှဲနေပြီကွာ ” သူလည်းပြောပြီးရော ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ လီးကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ပေါင်သားအိအိနှစ်ဖက်ရဲ့ အတွင်းထဲက စောက်ပတ်အဝမှာတေ့လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးလိုက်တယ် ” ဇွိ … အင့် ” လီးဒစ် ဝင်သွားတာနဲ့သူရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်ကိုထမ်းတင် ကိုယ်ကို ကိုင်းလိုက်တော့ သူရဲ့ဖင်ကြီး ကြွလာပြီး။
ခြေထောက်နှစ်ချောင်း မိုးပေါ် ထောင်သွားတယ် ” အင့် … …. ဒုတ်…. ဒုတ် …အင့် ” အရည်တွေနဲ့ ရွှဲဆိုနေတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးထဲကို ကျွန်တော့်လီးကြီးက သူ့ရဲ့သားအိမ်ကို အရှိန်ဖြင့် ဝင်ဆောင့်တော့ သူတော်တော်ဖီးကောင်းသွားပုံရတယ် ” အင့်အင့်အင့်အင့် ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အူးဟူးး ဟူးးး ” အား အင်း ဟင်းးးး … မောင်လေးရယ် ဖြေး ဖြေး မောင် … အ အင့် အိအိ … အား ဆောင့် …ဆောင့် ကောင်း ကောင်းတယ် … ထိတယ် အ … အရမ်းပဲ အိ အင့် ဟင့် ” ကျွန်တော် ပထမအချီမှာ လှေကြီးထိုးရိုးရိုး သေနတ်ပခုံးထမ်း နဲ့ပဲ အစဖွင့်လိုက်တာ ကလေးသုံးယောက်ရဲ့အမေ စောက်ပတ်သာပြောတာ စေးနေတာပဲ စေးဆိုသူ့ယောကျာင်္းနဲ့ကွဲတာတောင် သုံးနှစ်ကျော်ပြီတဲ့ မကွဲခင်က မနေတာကတစ်နှစ်လောက်ဆိုတော့ဗျာ သိပ်ကောင်းတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးပေါ့ဗျာ ပြီးတော့ စောက်ပတ်အတွင်းထဲက စုပ်ယူအားကလည်း အားကောင်းချက်ဗျာ စုပ်ယူအားကောင်းဆို မျှော့စောက်ပတ်နဲ့သွားတွေ့တာကိုး။
တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲလိုးဖူးသေးတဲ့ မျှော့စောက်ပတ်ကြီးကို အားရပါးရပဲလိုးနေမိတယ် “ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဗျိဗျိဗျစ်ဗျစ် အအအအ ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အင့်အင့်အင့်အင့် အားးးးး ရှီးးးးးးးး ” ” မောင် မောင် မြန် မြန်မြန်လိုးပေးပါလားးး အာ့အာ့အားးး အင်းးးး ” အချက်သုံးဆယ်လောက် လိုးပြီးသွားတော့ သူ့စောက်ပတ်ထဲက ပူနွေးနွေး အထိအတွေ့ကို လီးက ခံစားလိုက်ရတော့ သူပြီးသွားဆိုတာသိလိုက်တယ်သူပြီးပေမယ့် ကိုယ်ကမပြီးသေးဘူး ခါးကလည်း နည်းနည်းညောင်းလာတာရော ပခုံးကလည်းနာလာတာကြောင့် ” ချစ် ပုံစံပြောင်းရအောင်ကွာ ” ” ဟင်းးးး အင်းးးး ချစ်ဘယ်လိုနေပေးရမှာလည်း ပြောလေ ” ” ရတယ်ချစ် ဒီအတိုင်းလေးပဲ ပတ်လက်နေပြီး ဒူနှစ်ထောင်ထားလိုက်တော့ ” ဆိုပြီးပြောလည်းပြော သူ့ခြေထောက်ကို ပခုံးပေါ်ကနေချပြီး ဒူးထောင်ပေးလိုက်တယ် ပြီးမှ သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး နည်းနည်းမြှောက်လိုက်တော့။
စောက်ပတ်က အနောက်ကိုစူထွက်လာတယ် အဲ့တော့မှ လီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး အနောက်ဘက်ကို ဖောင်းဖောင်းလေး ပြူးထွက်လာတဲ့ စောက်ပတ်အဝကို တေ့ပြီး အသာအယာပဲ ပြန်သွင်းထည့်လိုက်ပြီး ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ် ဘယ်လိုပုံစံပဲလိုးလိုး မျှော့စောက်ပတ်ရဲ့ စုပ်ယူအားကတော့ အားကောင်းဆဲပဲဗျာ ပြီးတော့ လိုးချင်တဲ့စိတ်ထန်တာရော မျှော့စောက်ပတ်ရဲ့စုပ်ယူအားကြောင့် ခဏလေးပြီးချင်လာတာနဲ့ မြန်မြန်ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ် အချက်နှစ်ဆယ်လောက် အရောက်မှာပဲ ” အင့် … ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အားးးးးး အီးဟီးဟီးးးး ဗျွတ်ဗျွတ်ဗျစ်ဗျစ် အူးးးဟူးးဟူးးး ဇွိဇွိ ဗျစ်ဗျစ် အီးဟီးဟီးးးးး မောင် မြန် မြန်မြန် လိုး လိုးပါ အ့ အ့အာ ” သူနောက်တစ်ချီပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သိသာတယ် ပြီးခါနီးလေ မျှော့စောက်ပတ်ကလည်း ပိုပြီးစုပ်ယူအားကောင်းပြီး ပွစိပွစိဖြစ်ကာ စောက်ရည်တွေ ညှစ်ထွက်လာပြီး နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ ပြီးသွားပြီး။
ကျွန်တော်လည်း မောမောနဲ့ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်ရက် ခဏအနားယူပြီး သူ့ကိုတင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်တယ် အမောပြေလောက်မှ နှစ်ယောက်သား ရေချိုးခန်းဝင်ပြီး အပေါ့သွား ရေဆေးပြီး ခဏအနားယူနေကျတယ် ” ချစ် ကော်ဖီ သောက်မှာလား မောင်ဖျော်ပေးမယ် ” ” မောင် ဖျော်ပေးရင် သောက်မယ်လေ ” အဲ့ဒါနဲ့ ဟော်တယ်အခန်းက ပေးထားတဲ့ လျှပ်စစ်ရေနွေးဓါတ်ဗူးနဲ့ ရေနွေးတည်ထားတုန်း ပေးထားတဲ့ ကော်ဖီ နှစ်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီး ခွက်ထဲထည့်ပြီး ရေနွေးမပွက်ခင် သူနဲ့စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ေ့ပြာလိုက် နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက် ပါးလေးနမ်းလိုက်နဲ့ အဆင်ကိုပြေလို့ ကော်ဖီ သောက်ပြီးသွားတော့ နှစ်ယောက်သား ကုတင်တစ်ချပ်တည်းမှာ စောင်လေးတစ်ထည်တည်းနဲ့ အတူတူမှေးနေရင်း သူက လီးကို လာဆွတယ် သူဆွတော့ ငနဲကလည်း ဘယ်နေမလဲ တောင်လာပြီလေ သူကအတူယှဉ်အိပ်နေရာကနေ အောက်ကိုလျောသွားပြီး စောင်ထဲခေါင်းဝင်သွားပြီး ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့သူ့လက်နဲ့ လီးကိုကိုင် ကျွန်တော့်ပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်ပြီး ကိုင်ထားတဲ့လီးကို သူ့စောက်ပတ်အဝမှာ တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်တယ် ကျွန်တော့်လီးကလည်း အစွမ်းကုန်တောင်မတ်ပြီး အပေါ်ထောင်နေသလိုရှိတာမို့ သူ့ဖင်သားအိအိကြီးနှစ်ဖက်က ကျွန်တော့်လီးအပေါ်ကနေတည့်တည့်မတ်မတ်တေ့ချိန်၍ ဆောင့်ထိုင်ချလိုက်လေရာ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲကို လျှောကနဲ ထိုးစိုက်သွားခဲ့ပြီး … “ ပြွတ်…..ဗြစ်…ပလွတ်…ပြွတ်….ဗြစ်…” ” အား ကောင်းလိုက်တာ … မောင်ရယ် ” ဆိုပြီး … သူအဆက်မပြတ် ကျုံးပြီး ဖိကာဖိကာနဲ့ ဖင်ကြီးကိုတလိမ့်လိမ့်နေအောင် ဆောင့်ထိုင်ချနေပေတယ် လီးကလည်း စွိကနဲ ဇွပ်ကနဲ စောက်ရည်တွေလည်း လျှံပြီး စီးကျလာရကာနေ အဝင်ချောလှတာမို့ သူဆောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ လိုးဆောင့်ချရင်း အတန်ငယ်ကြာတော့ နည်းနည်းမောလာတယ်ထင်တယ် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို မှောက်အိပ်ချလိုက်ပြီး အမောဖြေနေတုန်း။
ကျွန်တော်ကလည်း သူ့နို့တွေကို အောက်ကနေ ဆွဲပြီး စို့ပေးနေလိုက်တယ် သူအမောပြေမှ ဖင်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလှုပ် ဆောင့်ပေးနေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ခပ်ဖြေးဖြေး အထက်အောက် ဖိချလိုက် မြှောက်တင်လိုက်နဲ့ ဆောင့်ပေးနေတော့ ကျွန်တော့်အဖို့မှာတော့ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ကာမအရသာကို အစွမ်းကုန် ခံစားနေရတာပေါ့ သူ့ရဲ့စောက်ခေါင်းလေးကလည်း ဆွဲငင်ဓါတ် တစ်မျိုး ရှိနေသေးတယ် တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ သူ့ရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကနေပြီး လီးကို ရစ်ပတ်ဆွဲပြီး စုပ်ယူသလိုကို ခံစားရတော့ အထိအတွေ့က တကယ်ကို အရသာရှိလှတာပေါ့ “ မောင် … ကောင်းရဲ့လား …” သူကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြီးမေးတော့ “ ကောင်းတာပေါ့ … ချစ် အာ့ ချစ်ရယ် သိပ်ကောင်းတာပဲ…” ပြောလည်းပြော လက်ကလည်း သူ့ရဲ့ ဖင်ထွားထွားအိအိကြီးကို အရသာခံကာ ဆုတ်ညှစ်ပြီးကိုင်နေသေးတယ် သူကလည်း အလိုက်တသိပဲ ခပ်ပြင်းပြင်း ဖိဖိပြီး ဆောင့်ပေးနေရာကနေ သူ့ရဲ့ မို့မောက်နေတဲ့ နို့နှစ်လုံးကို။
ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကို ဖိချပေးတော့ ဘယ်ရမလဲ အငမ်းမရ စို့တာပေါ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက မာတောင်နေပြီး သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကလည်း တဟင်းဟင်းဖြစ်လာပြီးတော့ သူ့ဖင်ကြီးတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဆောင့်ဆောင့်ပေးတယ် လီးကိုလည်း အရင်းထိမြုပ်အောင် သူ့ရဲ့ဆီးခုံနဲ့ ဖိကပ်ထားပြီး ပါချင်းကပ်လို့ လာပြီးအမောဖြေနေတယ် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ စောက်ခေါင်းအတွင်းကနေ ချွဲကျိနေတဲ့ စောက်ရည်တွေက စိမ့်ထွက်လာပြီး ကျွန်တော့်ဆီးခုံပေါ်ကို စီးကျလာပြီး ပေါင်တွေပေါ်မှာရော ရွဲကုန်တယ် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့မောပန်းပြီး သက်ပြင်းချသံလေးတွေက ဟင်းကနဲ ထွက်လာခဲ့တယ် အဲ့ဒါနဲ့ပဲ သူ့ကိုအပေါ်မှဆင်းစေပြီး ပက်လက်လန်အိပ်ခိုင်းလိုက်တယ် ပြီးမှသူ့ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်ကြား နေရာပြန်ယူပြီး လက်က စောက်ပတ်နခမ်းသားလေးကိုဖြဲပြီး ကျန်တစ်လက်က လီးက်ိုကိုင်ကာ စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ပြီး အချိန်သိပ်မဖြုန်းတော့ပဲ ထိုးသွင်းလိုက်တယ် သူ့အဖုတ်က စောက်ရည်ကြည်တို့ကလည်း စိမ့်ထွက်နေပြီမို့။
ကျွန်တော့်လီးက တချက်ထဲနဲ့ပဲ အဆုံးထိအောင်တန်းဝင်သွားတယ် သူ့ပါးစပ်ကနေလည်း အိကနဲအသံလေးသာထွက်လာပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ကျောပြင်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်တွယ်ထားတယ် ကျွန်တော်ကလည်းလီးချောင်းနဲ့ သူ့အဖုတ်အတွင်းသားနုနုလေးတွေရဲ့ ပွတ်တိုက်တိုးဝင် ထိတွေ့တာကိုအရသာခံရင်း ဇိမ်ဆွဲပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း စောင့်လိုးနေရာကနေ သူအောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးလာတာနဲ့ သူ့လက်သည်းတွေက ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကိုအားမလိုအားမရ ကုတ်ခြစ်လာတာကြောင့် ဆောင့်တဲ့အရှိန်ကို မြင့်တင်လိုက်တော့ ရင်ထဲမှာရော ခေါင်းထဲမှာရော လီးကနေရော သူ့အဖုတ်ကနေ စုပ်ယူမှုတွေရော ခံစားချက်တွေက ရောပြီး စိတ်လှုပ်ရှားပြင်းထန်နေလို့ စောင့်လိုးချက်နှစ်ဆယ်လောက်မှာပဲ လီးကနေ ဖောင်းကြွတင်းလာပြီး လီးထပ်ကနေ လရည်တွေကို ညှစ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ် သူလည်း နောက်မကျပါဘူး ကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်တူနီးပါး ပြီးသွားခဲ့လို့။
တယောက်ကိုတယောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ရင်းနဲ့ ဒုတိယတစ်ချီပြီးဆုံးပြီး ငြိမ်သက်နေလိုက်တော့တယ် ခဏနားပြီး အမောပြေမှသူ့ပေါ်ကနေဆင်းပြီး ကိုယ်တုံးလုံးပဲ ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ် ရေးချိုးနေတုန်း သူပါရောက်လာတယ် သူ့ကိုလည်းရေချိုးပေး အဖုတ်ကိုလည်း သန့်ရှင်အောင် ရေးဆေးပေးလို့ ရေချိုးပြီးတော့မှ အဝတ်အစားလဲပြီး ခဏနား ပြီးမှ ဟော်တယ်က ဝန်ထမ်းလေးကို အစားအသောက်မှာရအောင် ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တယ် ဝန်ထမ်းလေးရောက်လာတော့ ရုပ်မပျက်အောင် သူကတစ်ကုတင် ကိုယ်ကတစ်ကုတင်နဲ့ ဗွိဒိယို ကြည့်နေပုံလုပ်ပြီး ထမင်းဟင်းမှာစားလိုက်ကြတယ် တစ်ကုတင်မနေလို့မရဘူးလေ တူဝရီးဆိုပြီး အခန်းငှားထားတာမို့ပေါ့ စားသောက်ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်ထပ်ဖျော်ပြီး သောက်ကြတယ် သောက်ပြီးသွားတော့မှ တတိယအချီအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တယ် သူ့ရဲ့ကုတင်ပေါ်မှာပဲ စောင်ကလေးတစ်ထည်ကို နှစ်ယောက်ခြုံပြီး ကျွန်တော့်လက်မောင်းပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကိုတင်ပြီး သူကမှေးနေတယ် သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့်ဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီး။
သူ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပါ ဘေးတစ်စောင်းဆွဲလှည့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်လည်း ဘေးတစ်စောင်းလေးနေပြီး သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းလေးကို စတင်ပြီး နမ်းလိုက်တယ် အဲ့လို နုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းရင် သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကပဲ သူက ကိုယ့်ကိုရှေ့ကနေပြီး ဦးဆောင်သွားတယ် နမ်းနေရင်းနဲ့ သူကခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်ရှောလိုက်ပြီး သူ့ခေါင်းကိုစောင်အောက်ဝင်ပြီး ကျွန်တော့် ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး လီးကိုကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ပါးစပ်နဲ့ စတင်ငုံလိုက်တော့ အာငွေ့နွေးနွေးလေးက လီးကနေတဆင့် အကြောတွေကိုရောက်ရှိလာပြီး စိမ့်ကနဲ့နေအောင် ခံစားလိုက်ရတယ်ဒစ်ကလေးကို ငုံပြီး ဖွဖွလေးကိုက်လိုက်တော့ ” အားးးးး … ရှီးးးးး ချစ် ချစ်မောင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ကွာ ” သူ့ရဲ့ပုလွေအစွမ်းကို ဆယ်မိနစ်လောက်ခံစားပြီးမှ “။
ချစ် … လေးဖက်ကုန်းပေးပါ့လား မောင်နောက်ကနေ ချစ်ရဲ့ဖင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး လိုးချင်တယ် ” ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူထလာပြီး ဖင်ကုန်းပေးတယ် သူဖင်ကုန်းလိုက်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်လေးက နောက်ကိုထွက်လာပြီး အရည်ကြည်လေးတွေရွှဲနေတာရော နဂိုအသားဖြူတဲ့ သူဆိုတော့ စောက်ဖုတ်လေးက ရဲရဲပြဲပြဲလေးဗျာ ဒါနဲ့ သူဖင်နဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုကြည့်ပြီး မနေနိုင်တာနဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်တော့ ” အားးးရှီးးးးး မောင် မောင်ကလည်းကွာ အနေရခက်အောင်တအားလုပ်တာပဲ မောင့်လီးကြီးသာ ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးပြီး မြန်မြန်လိုးလိုက်ပါတော့ကွာ ” သူပြောမှပဲ သူ့ရဲ့ဖင်နောက်မှာ ဒူးထောက်နေရာယူလိုက်ပြီး လီးကိုကိုင်ကာ သူစောက်ဖုတ်နခမ်းသားလေးကို ဖြဲပြီး လီးကိုတေ့ပြီး တစ်ဆုံးထိုးပစ်လိုက်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်က အရည်ရွှမ်းနေတော့ သူ့ရဲ့သားအိမ်ထိကိုသွားထောက်မိတယ် ” ဗျစ် … ဗြီးးးးးး ဒုတ် ” ” အာ့ ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် “ဟုငြီးငြူနေလေတော့လေသည် ……ပြီးပါပြီ။